Literatiora apokaliptika na soratra apokaliptika no ilazana ireo boky mirakitra ny faminaniana ara-pahitana avy aminAndriamanitra ny aminny maha antomotra ny hiafaranizao rehetra izao sy ny hiavianny tontolo vaovao tonga lafatra. Ny soratra fanta ...
Pseodepigrafa no iantsoana ireo boky heverina fa mitondra anaranolona tsy nanoratra azy nefa lazaina fa nanoratra azy. Ataonny Protestanta hoe pseodepigrafa ireo boky antsoinny Katolika hoe apokrifa. Ny mpikarona ny tantaranny fanoratana ny Baibo ...
I Perea dia fileovana ao atsinanani Jordàna taminny Andro Taloha nanjakanny Romana tany Atsinanana Akaiky. Mifanandrifindrify aminny Galaada ao aminny Testamenta Taloha izy. Mivelatra avy any Delapolisy mankany Maheronta any atsinanny Ranomasina ...
Ny anarana hoe Jakoba dia anarana be mpitondra. Ao aminny Baiboly dia maro ireo olona antsoina hoe Jakoba. Ao aminny Testamenta Taloha: Jakoba patriarka, zanaki Isaka, izay atao hoe Israely koa; Ao aminny Testamenta Vaovao: Jakoba zanaki Alfeo iz ...
Kanôna no iantsoana ny lisitra na fitambaran ireo boky inoan ny Jiosy na ny Kristiana ho Soratra Masina ka mitambatra ao amin ny Baiboly ampiasainy. Ny fivavahana na fiangonana tsirairay dia mety samy manana ny kanônany. Misy ohatra ny kanônan ny ...
Ny pseodepigrafa na soratra pseodepigrafa na boky pseodepigrafa dia ilazanny Protestanta ireo soratra sy boky ataonny Katolika hoe "apokrifa", izany hoe tsy isanny kanonanny Baiboly katolika. Izay ataonny Protestanta hoe soratra na boky apokrifa ...
Ny pseodepigrafa ao aminny Testamenta Vaovao dia boky maro ao aminny Testamenta Vaovao, ao aminny Baiboly kristiana izay heverinny ankamaroanny mpikaroka fa tsy nosoratanilay olona lazaina fa nanoratra azy, isanizany ny enina aminny Epistily telo ...
Leland Clark 1858: Chester Greenwood - injeniera 1911: Willi Krakau - injeniera 1917: Daniel Bukantz - mpitsabo nify 1680: Jean-Jacques Martinet - injeniera 1884: Philip Louis Pratley - injeniera sivily, injeniera 1918 1898: Blair Tennent - mpana ...
1766: Charles Macintosh - injeniera 1800: Charles Goodyear - mpamorona, injeniera 1796: Johann Christian Poggendorff - Mpanao gazety, mpahay fizika 1813: Alexander Parkes - mpamorona, injeniera 1833 1808: Andrew Johnson - mpanao politika 1809: Wi ...
Georges de la Hèle Guillaume de LAubespine Georges Ier de Hesse-Darmstadt Diana Scultori Ghisi Johan van Oldenbarnevelt John Norreys Oichi Juste Lipse Jurij Dalmatin Herman de Lynden 1547-1603 Stanisław Żółkiewski Peter Bales Alde le Jeune Jeanne ...
Frédéric de Brandebourg-Ansbach Marie de Saint-Joseph Antoine Arnauld 1616-1698 Philip Howard cardinal François de Vendôme Giovanni Sagredo Andreas Gryphius Antoinette Bourignon Isaac Luttichuys William Kiffin Alexandre de Bournonville Georg Matt ...
Benedetto Varchi Atahualpa Leonardo da Pistoia Guillaume Bigot Natalis Comes Girolamo Recanati Capodiferro Antoine-Marie Zaccaria Elizabeth Blount Alfonso de Àvalos Miguel López de Legazpi Francesco Corteccia Pieter Coecke van Aelst Briquemault L ...
1826: Charles Cornwallis Chesney - injeniera 1864: Miguel de Unamuno - Poeta, filôzôfy, mpanoratra, mpanoratra fanoharana, mpanoratra tantara lava, mpanoratra tantara tsangana 1775: François Michel de Rozière - injeniera 1571: Le Caravage - Trofi ...
François II de Lorraine Susneyos dÉthiopie Hugh Roe ODonnell Fakhr-al-Din II Antoinette dOrléans-Longueville Cyrille Loukaris Charles Bouvard Jan Antonisz van Ravesteyn Izaak van den Blocke Tadayo Sakai Andrea Baroni Peretti Montalto Henri Ier de ...
Josep Samitier dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pireneni Espaina teraka ny 2 Febroary 1902 tao Barselona ary maty ny 4 Mey 1972 tao Barselona
Ricardo Zamora dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pireneni Espaina teraka ny 21 Janoary 1901 tao Barselona ary maty ny 8 Septambra 1978 tao Barselona
Juan Antonio Samaranch dia mpanao politika, mpanatanja-tena mizaka ny zom-pireneni Espaina teraka ny 17 Jolay 1920 tao Barselona ary maty ny 21 Aprily 2010 tao Barselona
Ny Fiadiana ny tompondaka eran-tany ho an’ny kitra 2014 dia ny fiadiana ny tompondaka faha 20. Ny fikarakarana ny fiadiana moa dia ny FIFA no tomponandraikitra aminny zavatra rehetra. Izy io dia niatomboka taminny 12 Jona 2014 hatraminny 13 Jolay ...
Sid Meiers Civilization II, mety voatono koa Civ II na Civ 2, dia kilalao nà stratejia nataoni MicroProse, ary natao ho anny ordinatera. I Brian Reynolds ny mpamorona azy. Faha nanao azy koa i Douglas Caspian-Kaufman sy i Jeff Briggs. Naha dia fa ...
Kilalao videô ny Freeciv, tsy andoavam-bola ilay kilalao, mangala-tahakanilay kilalao Civilization izy. Ny targetra-ny dia mandresy ny sivilizasiona tsy namana. Voatananny fikambanana internasionaly ny programmateur ilay kilalao ; mba hanomeno an ...
Ny smartphone na koa finday marani-tsaina dia finday manana ny fahafahanny mpanampy dijitaly anny tena, fakan-tsary dijitaly ary solosaina finday. Atao aminny alalanny efijery kasihina ny fampidirana ny fampahalalana. Araka ny fomba fandehanny so ...
Android dia mpandrindra milina ho anny finday ampiasaina aminny smartphone, solaitra, PDA ary famantaranandro marani-tsaina. Izy io dia mpandrindra milina open-source izay mampiasa ny voa Linux. Ny mpamoaka anio mpandrindra milina io dia orinasa ...
Sony dia orinasa japoney lehibe izay manana ny foibeny ao amin’ny fivondronan’i Minato, ao Tokyo, Japana. Miasa amin’ny vala toa ny haikoriamboanaratra, ny fanamboarana finday, ny kajimirindra, ny lalao videô, ny mozika, ny horonantsary ary ny ha ...
Ny iPhone 7 ary iPhone 7 Miampy 2 dia finday raitra izay natolotra noho ny Paoma aminny Paoma Hetsika Manokana natao tao aminny Volavolan-dalàna Graham olom-Pirenena Auditorium any San Francisco ny Californie taminny 7 septambra, 2016.
Ny famantaranandro marani-tsaina dia famantaranandro tanana ahitana solosaina izay afaka manao zavatra maranitra kokoa afatsy ny manondro ny fotoana. Ny famantaranandro marani-tsaina taminny voalohany dia nahavita zavatra toa ny fikajiana, fandik ...
Ny efijery kasihina dia efijerin-tslosaina ampiasaina azo ampiasaina aminny alalanny fikasihana azy aminny tanana na aminny alalanny penina ho solonny voalavo ary ny fitendry. Ampiasaina aminny mpanampy dijitaly manokana, solosaina solaitra, amin ...
Ny Pinyin, dia fandikana aminny abidy latina anny fiteny sinoa any aminny Repoblika Entim-bahoakani Sina, ary io no tena ampiasaina aminny fandikana aminny abidy latina anny fiteny mandarina ; ny sinoa any Taiwan dia mampiasa ny fandikana Wade-Gi ...
Facebook dia sampan-draharaha tambajotra ara-tsosialy noforonina ny volana Febroary 2004, izay karakarainny orinasa Facebook Inc. Taminny volana Septambra 2012, nihoatra ny iray miliara ny isanny mpampiasa ani Facebook, ary mahery ny antsasakizy ...
Ny iPad dia tablety elektrônika namboarinny orinasa Apple. Ny fampiasana ilay tablety dia ho anireo aino aman-jery toy ny boky, ny horonantsary, ny gazetiboky, ny mozika ary ny lalao. Azo ampiasaina ho anny fitetezana ny aterineto ary aminny imai ...
Instagram dia sary amerikana sy fizarana serivisy tambajotra sosialy anny Facebook, noforonini Kevin Systrom sy Mike Krieger ary natomboka taminny iOS taminny Oktobra 2010. Navoaka taminny Aprily 2012 ny kinova Android., arahinny sehatrasa voafet ...
Ny sinôgrama na ny soratra sinoa dia soratra ampiasaina aminny fanoratana ny teny sinoa ary aminny teny aziatika hafa. Ny anaranizy ireo aminny teny sinoa dia hanzi. Nampiasaina ho anny fanoratana fiteny hafa koa izy ireo: anisanizany ny fiteny j ...
Ny rafitra fitantanana banky angona dia rindrankajy rafitra izay natao hitahiry ary hizara ny fampahalalana ao anaty banky angona iray. Ny RFBA dia hahafahana mampisoratra anarana, mahita, manova, mifantina, mamadika ary manaprinty fampahalalana ...
Saturn V dia anarana mpanipy ampiasainny NASA ho anny tetikasa Apollo sy skylab taminny 1967 hatraminny 1972, taminny fifaninananny amerikana sy ny sovieika. Mpanipy manan-drihana, mampiasa ergol ranoka, karazany farany aminny fianankavianny Satu ...
Ny milina fanoratana dia milina afahana manoratra taratasy aminny alàlanny lohavy voaprinty. Ny endriny dia klavie manana bokotra maromaro manoro ny soratra hoprintiana eo ambonny taratasy rehefa tsindriana ilay bokotra. Ny milina fanoratana dia ...
Ubuntu ary zaraina am-pahalalahana sy open source izy. Tsotra ny fampiasana azy ho anny mpampiasa tsotra. Nosafidianny mpamaky teo aminny desktoplinux.com izy ohatra ny fizarana linux malaza indrindra hoanny birao, maka ny 30%-nny installation Li ...
Ny DVD dia optical fitehirizana mpanelanelana ny antonony na avo-fahaizana. Matetika ampiasaina ho anny lahatsary fitehirizana, nefa ihany koa ny sary, feo, sy ny tahirin-kevitra. Ilay DVD dia tsara toy ny DND sy ny zava-maniry CD ho izy ireo man ...